Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana mpivarotra any Virginia - ara-dalàna ny marijuana any Virginia
Te hividy rongony rongony any Virginia ve ianao? Avy eo ianao dia tokony hianatra ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana amin'ny mpivarotra any Virginia. Ny fahazoan-dàlan'ny mpivarotra dia iray amin'ireo fahazoan-dàlana dimy napetraka ao amin'ny lalàna vaovao.
Betsaka - saingy tsy izy rehetra - amin'ny lalàn'ny lalàna dia mitaky latsa-bato faharoa amin'ny 2022, na "fananganana indray."
Ny fepetra hametrahana ara-dalàna ny fananana rongony sy ny fambolena amin'ny 1 Jolay 2021 dia tsy mitaky famerenana miverina, na koa sazy ho an'ireo zaza tsy ampy taona manana rongony sy fepetra hamelana ny asa fanaraha-maso.
Inona no atao hoe lisansa mpivarotra any Virginia?
Ny fahazoan-dàlana mpivarotra dia taratasy ara-dalàna manome alalana ny tompona fahazoan-dàlana hividy na hanana marijuana antsinjarany, vokatra marijuana antsinjarany, zavamaniry marijuana tsy matotra, na masomboly marihuana avy amin'ny mpivarotra marijuana ary hivarotra marijuana antsinjarany, vokatra marijuana antsinjarany, zavamaniry marijuana tsy matotra, masomboly marijuana ho an'ny mpanjifa amin'ny toerana nankatoavin'ny Birao.
Raha jerena amin'ny ankapobeny, ny fahazoan-dàlana mpivarotra dia ny taratasy ara-dalàna mamela ny tompony hanokatra sy hampiasa dispensary marijuana ampiasan'ny olon-dehibe.
FIVAVAHANA MISY: LICENSE Cultivation VIRGINIA MARIJUANA
FIVAVAHANA MISY: LISENY WHOLESALER VIRGINIA MARIJUANA
Ahoana ny fomba fangatahana lisansa mpivarotra fivarotana any Virginia
Ny fankatoavan'ny mpanao lalàna ny volavolan-dalàna momba ny Senate 1406 sy ny volavolan-dalàna momba ny trano 2312 dia nahatonga an'i Virginia ho fanjakana atsimo voalohany nanangana ara-dalàna ny fananana sy fampiasana marijuana ataon'ny olon-dehibe.
FIVAVAHANA MISY: FAMPIANARANA LISENY FIVORIANA OHIO MARIJUANA